Fitondrana Vichy - Wikipedia
Ny anaran'ny fitondran'i Vichy dia manondro ny fitondrana ara-politika tsy refesi-mandidy napetraka tany Frantsa nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Traditionalista, fankahalana vahiny ary anti-Semitika, notarihin'i Marshal Philippe Pétain, nampian'ny lehiben'ny governemanta Pierre Laval tamin'ny 1940 sy tamin'ny 1942 ka hatramin'ny 1944, niaraka tamin'ny amiraly vonjimaika François Darlan. Ny fitondran'i Vichy dia nitazona ny governemantan'i Frantsa nanomboka tamin'ny 10 Jolay 1940 ka hatramin'ny 20 Aogositra 1944 nandritra ny fibodoana ny firenena tamin'ny Reich Fahatelo. Nantsoina izany fitondrana izany satria tao Vichy no niorenan'ny governemanta, any amin'ny faritra malalaka.
Taorian’ny latsa-bato nataon’i Philippe Pétain tamin’ny 10 Jolay 1940, nataon’ ny Antenimieram-pirenena (fivorian’ ny Antenimieran’ ny Solombavambahoaka sy ny Antenimieran-doholona), dia nanjavona tao amin’ny lalàna ofisialy ny teny hoe “Repoblika frantsay”; “Fanjakana frantsay” àry no iantsoana ny fitondrana. Noho ny lafiny manokana eo amin'ny tantaran'i Frantsa, ny tsy fisian'ny maha-ara-dalàna azy sy ny toetran'ny jeneralin'ny anarana ofisialy, ny fitondrana dia matetika antsoina amin'ny anarana hoe "fitondrana Vichy", "governemanta Vichy", "France de Vichy "na. amin'ny metonymy "Vichy" fotsiny.
Ny Alemàna, izay nibodo voalohany ny Avaratra sy Andrefan'ny tanin'ny firenena, ary nanomboka tamin'ny 11 Novambra 1942, niaraka tamin'ny Italiana, ny metropolis manontolo, dia nandao ny fitondrana frantsay teo ambany fahefan'ny governemanta frantsay napetraka tao Vichy, any atsimo atsinanana. ny Allier, ary notarihin’i Pétain. Notendrena tamin’ny 17 jona 1940, teo anivon’ny korontana, ny Filohan’ny Filankevitra nataon’ny Filoha Albert Lebrun, Pétain no nisolo ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny Jolay 1940, izay na dia tsy niala tamin’ny andraikiny aza, dia nisotro ronono tamin’ny asany, niantso an’i Pétain. ny tenany “lehiben'ny fanjakana frantsay”, avy eo dia nametraka politikan'ny fiaraha-miasa tamin'ny Nazia ary nametraka lalàna manohitra ny Semitika.
Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia nisy endrika maro ity fiaraha-miasa ity: fiaraha-miasa ara-toekarena, fisamborana ireo mpiady amin’ny fanoherana, Freemasona, mpitondra fivavahana katolika, ary mpanohitra ara-politika (indrindra ny Kominista), famoriana ireo Jiosy frantsay sy vahiny, mpitsoa-ponenana tany Frantsa niaraka tamin’ny firongatry ny Nazisma tao amin’ny firenena. Tamin'ny taona 1930, tany amin'ny faritany metropolitanina, dia natolotra ny Alemà ary natao sesitany tany amin'ny toby famonoana nazia. Eo amin'ny sehatra ara-miaramila, ny fitondrana dia tsy mpiara-dia ofisialy amin'ny Reich Fahatelo fa ny governemanta Laval fahenina dia manaiky ny Légion des volontaires français (LVF) ho toy ny fikambanan'ny mpiasam-panjakana8 ary mandray anjara amin'ny ady alemana amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasan'ny miaramilany. indostria. Izy io koa dia nanome hery mitam-piadiana fanampiny ho an'ny famoretana any amin'ny tanibe Frantsa, miaraka amin'ny milisy frantsay, tompon'andraikitra amin'ny famonoana olona manerana ny firenena. Raha jerena ireo miaramila alemà vitsivitsy niparitaka tany amin’ny faritany midadasika toa an’i Frantsa, dia tsy ho azo nampiharina ny baikon’ny Nazi raha tsy nisy ny fandraisan’anjaran’ny fanjakana frantsay manontolo, ny polisy ary ny milina ara-pitantanana tamin’izany, teo ambany baikon’ny governemanta frantsay. , izay mijanona ho ohatra miavaka any amin'ireo firenena eoropeanina voabodo.
Noho ny fiheverana fa tsy nitsahatra ny fisian’ny Repoblika Frantsay, dia nanambara ny Jeneraly de Gaulle fa “tsy ara-dalàna, tsy manan-kery” ny fitondrana Vichy tamin’ny fanafahana tamin’ny fahavaratry ny taona 1944. Ny fibodoana dia tsy neken'i Jacques Chirac raha tsy tamin'ny 1995.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitondrana_Vichy&oldid=1042922"
Voaova farany tamin'ny 11 Janoary 2022 amin'ny 18:52 ity pejy ity.